PVC coil ကား Mat စက် - တရုတ် Qingdao Xinrui ပလတ်စတစ် Machinery
ပလပ်စတစ် Mat စက်
PVC coil ကား Mat စက်
PVC coil တံခါး Mat စက်
PVC အကှေ့အကောကျပြီးတော့ S က Mat စက်
PVC Antislip Mat စက်
PVC Hollow ကြမ်းပြင် Mat စက်
LDPE မြက် Mat စက်
PE Cable ကို Tile စက်
PVC / WPC မြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့စက်
WPC တံခါးဘုတ်အဖွဲ့စက် Making
WPC အမှတ်တရ Panel ကိုစက်
PVC / PP ဂဟေဆော်ခြင်းလှံတံစက်
PVC မျက်နှာကျက် Panel ကိုစက်
PVC ခရု Hose စက်
လိမ် PVC Flexible Hose ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
WPC-PVC အမှတ်တရ Panel ကိုစက်
FOB စျေး: Negotiable အ
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင်5အစုံ
ဆိပ်ကမ်း: Qingdao ဆိပ်ကမ်း
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T, L ကို A / C, D ကို / P ကို
PVC ကား Mat ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတဦးတည်းလိုင်းကွိုင်အဘို့ဖြစ်၏နှစ်ခုလိုင်းများအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်, အခြားလိုင်းပြန်အဘို့ဖြစ်၏ (နောက်ကျောသို့မဟုတ်နောက်ကျောလက်သည်းနှုန်းကိုမြင့်တက်) .Firstly, ထိုကွိုင် PVC ကွိုင်စက်ကနေထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း, ထို့နောက် PVC နှင့်အတူအရပ်ဌာန၌ကွိုင်ထား ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, ထိုကွိုင်နှင့်နောက်ကျော Infra-အနီရောင်ဓါတ်ရောင်ခြည်အပူပေးစက်၏နည်းလမ်းဖြင့်အပြည့်အဝကော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြန် Mat ။
အမည် PVC coil ကား Mat စက်
အပိုင်းတစ်ဦးက PVC ကွိုင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အပိုင်း B, PVC ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပြန်နှုန်းကိုမြင့်တက်
စုစုပေါင်း installed စွမ်းရည် 350KVA
အလုပ်သမား 3-4 ပုဂ္ဂိုလ်များ
ပစ္စည်း PVC + Stablizer + DOP + ESBO + အခြားသူများ
*1 ။PVC ကွိုင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
စက် Feature ကို:
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဧရိယာ (L ကို * W * H ကို) 40 * 2.5m * 3.2m
installed စွမ်းရည် 260KW
လိုင်းအမြန်နှုန်း 2.2-2.5m / မိနစ်
တိုက်ရိုက်တည်ငြိမ်၏မော်တာများနှင့်နှစ်ရှည်လများအချိန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပိုကြီးဂီယာအုံ 1.Adopting ။
P20 ပစ္စည်းကို T-သေ 2.Adopting 45 # သံမဏိပစ္စည်းထက်ပိုကောင်းတဲ့အစွမ်းသတ္တိ၏ဖြစ်ပါတယ်။
အပြည့်အဝဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အပူထိန်းသိမ်းရေး၏ထူအပူလျှပ်ကာပစ္စည်းနှင့်အတူ 10 အပူမီးဖို 3.Adopting နှင့်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းတစ်ဝက်ကိုကယ်တင်နှင့်ရိုးရာမီးဖိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်လျှော့ချဖို့ကြီးမားတဲ့ပါဝါ consumption.Shorter အပူအချိန်သိမ်းဆည်းပါ။
Siemens မော်တာ, ABB အင်ဗာတာ, Schneider contactor, RKC အပူချိန် Controller, ရှည်လျားသောအလုပ်လုပ်အချိန်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုကိုသေချာစေရန်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း၏ကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ် 4.Adopting ။
*2. PVC ဆူး (လက်သည်း) ကျော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဧရိယာ (L ကို * W * H ကို) 17m * 3.3m * 2.5m
installed စွမ်းရည် 130KW
လိုင်းအမြန်နှုန်း 4-5m / မိနစ်
တည်ငြိမ်ပြေးခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူလုပ်ဆောင်နေအချိန်သေချာစေရန်ပိုကြီးဂီယာအုံ 1.Adopting ။
L-shaped သုံး roller ပြက္ခဒိန်စက် 3.Adopting, roller water.Roller နှင့်အတူဖြန့်ဝေနေသည်စုဝေးနှင့် disassembled ခံရဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
fixed-အရှည် transversal ရှုးနှင့်အစွန်းရှုး 4.Adopting ။
5. Siemens မော်တာ, ABB အင်ဗာတာ, Schneider contactor, RKC အပူချိန် Controller, ရှည်လျားသောအလုပ်လုပ်အချိန်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုကိုသေချာစေရန်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း၏ကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်ချမှတ်။
အတိုင်းအတာ width: 1220mm, အထူ: 8-20mm, အလျား: စိတ်ကြိုက်
လက္ခဏာ ရေစိုခံ, Dustproof, Flame ဟာနှောင့်နှေး, Anti-ချေး, Anti-ကျုံ့
ယခင်: PVC coil တံခါး Mat စက်
နောက်တစ်ခု: PVC Antislip Mat စက်
Antislip PVC ကား Mat စက်
နှစ်ချက်အရောင် PVC coil Mat စက်
PVC ကား Mat Extrusion လိုင်း
PVC ကား Mat စက်
PVC ကား Mat လုပ်ခြင်း စက်
PVC ကား Mat ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC coil ကားကြမ်းပြင် Mat စက်
PVC coil ကား Mat Extrusion လိုင်း
စက်ပြုလုပ်ခြင်း PVC coil ကား Mat
PVC coil ကား Mat ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC coil Mat Extrusion လိုင်း
PVC coil Mat Extrusion စက်
PVC coil Mat စက်
စက်ပြုလုပ်ခြင်း PVC coil Mat
PVC coil Mat ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC coil မှလှို Mat စက်
PVC ကြမ်းပြင် Mat Extrusion လိုင်း
PVC ကြမ်းပြင် Mat Extrusion စက်
PVC ကြမ်းပြင် Mat စက်
PVC ကြမ်းပြင် Mat ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC Foor Mat စက် Making
PVC Mat Extrusion လိုင်း
PVC Mat Extrusion စက်
PVC Mat စက်
PVC Mat စက် Making
PVC Mat ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC အကှေ့အကောကျပြီးတော့ S က Mat ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
LDPE မြက် Mat / အကာအရံစက်
E-mail ကို: steven@xinruisuji.com
Skype ကို: steven549100
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့ကိုသင့်အီးမေးလ်ထားခဲ့ပါကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့ကို 24 နာရီအတွင်းအဆက်အသွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။